ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခြင်း
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကို ၂၀၁၇ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့ နံနက် (၀၉:၀၀)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း (ရုံးချုပ်) အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပရာ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင် တက်ရောက်အမှာစကား ပြောကြားပါသည်။
E-GSM Band လှိုင်းနှုန်းစဉ် သတ်မှတ်ချထားပေးမည့် အစီအစဉ်အား သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံခြင်း
Published: Sep 22 Posted Under: Place: နေပြည်တော်
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် E-GSM Band (882.5 MHz-890 MHz (Uplink) နှင့် 927.5MHz-935 MHz (Downlink)) အား မိုဘိုင်းအော်ပရေတာများသို့ သတ်မှတ်ချထားပေးရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ E-GSM Band လှိုင်းနှုန်းစဉ် သတ်မှတ်ချထားပေးမည့် အစီအစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိတ်ပါဝင်စားသော အများပြည်သူများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ပါဝင် အကြံပြုနိုင်ရေး ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
Consultation Paper – Future Allocation of E-GSM Spectrum အား အောက်ပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST MYANMAR: Telecommunications Sector Reform Project Credit Number: MM-5353 C 3.2.1: eLeadership and eGovernment training and workshops
Published: Sep 20 Posted Under: Place: နေပြည်တော်
The Government of the Union of Myanmar has received financing from the World Bank toward the cost of the “Telecommunications Sector Reform Project” and intends to apply part of the proceeds for consulting services.
The Government of Myanmar is keen to use ICT to deliver e-Government services to its constituents, enhance competitiveness and attract investors, and for making the Government more accountable, responsive and transparent.
ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ သံအမတ်ကြီး၊ H.E. Mr. Antonio J.M de SouzaeSilva အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
Published: Sep 19 Posted Under: Place: နေပြည်တော်
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၉)ရက်နေ့၊ နေ့လည်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ သံအမတ်ကြီး၊ H.E. Mr. Antonio J.M de SouzaeSilva အား နေပြည်တော်၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရုံး၌ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။